Tokyo dia nanambara fa misy ny vonjy taitra COVID-19 nefa mbola mandeha ihany ny Lalao Olaimpika any Tokyo?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Tokyo dia nanambara fa misy ny vonjy taitra COVID-19 nefa mbola mandeha ihany ny Lalao Olaimpika any Tokyo?
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny praiminisitra japoney Yoshihide Suga
Ny tanàna renivohitra Japoney dia niditra tao anatin'ity toe-javatra vonjy taitra vaovao ity, telo herinandro latsaka izay, no kasaina hampiantrano ny Lalao Olaimpika Tokyo amin'ny taona 2020.
Fanjakana vaovao vonjy taitra no kasaina hatao ao Tokyo ao anatin'ny fiakaran'ny tranga COVID-19 vaovao.
Ny fanjakana vaovao misy fepetra dia manan-kery any amin'ny faritra Tokyo manomboka ny 12 Jolay ka hatramin'ny 22 Aogositra.
Tokyo dia nitatitra 920 tranga COVID-19 vaovao tamin'ny Alarobia, izay ny totaliny avo indrindra isan'andro hatramin'ny 13 May.
Nanambara ny praiminisitra Josiana Yoshihide Suga androany fa hisy fanjakana vonjy maika vaovao hatao ao Tokyo ao anatin'ny fiakaran'ny tranga COVID-19 vaovao.
Ny renivohitra japoney dia miditra amin'ity fanjakana vaovao misy vonjy taitra ity, telo herinandro latsaka izay, no kasaina hampiantrano Lalao Olaimpika Tokyo 2020.
Raha ny voalazan'ny praiminisitra, ny fanjakana vonjy taitra vaovao dia manan-kery any amin'ny faritra Tokyo manomboka ny 12 Jolay ka hatramin'ny 22 Aogositra.
Nilaza i Suga fa mirongatra ny isan'ny mponina ao Tokyo voan'ny coronavirus, ary ny fepetra maika - tsy dia henjana noho ny fanidiana tanteraka - dia tokony hanampy amin'ny fifehezana ny fihanaky ny virus ary hanamaivana ny tsindry amin'ireo hopitaly eto an-drenivohitra efa miady mafy hanomezana ampy fandriana.
Nanampy ny PM fa "handray ny fepetra rehetra azo atao" hisorohana ny fihanaky ny viriosy.
Ny fanjakana vonjy taitra koa dia nitarina tany amin'ny Prefektioran'i Okinawa, raha toa kosa ny fepetra vonjimaika ho an'ny faritany Osaka, Saitama, Chiba ary Kanagawa dia hitarina hatramin'ny 22 Aogositra.
Fanapahan-kevitra ofisialy momba ny fanjakana maika ao Tokyo no hambara amin'ny Alakamisy aorian'ny fivorian'ny mpitsabo.
Tokyo dia kasaina hampiantrano ny Lalao Olaimpika 2020 nanomboka ny 23 Jolay ka hatramin'ny 8 Aogositra - herintaona taty aoriana noho ny nomanina tany am-boalohany noho ny fihemorana nateraky ny aretin'ny COVID-19.
Betsaka ny fanoherana ny besinimaro amin'ilay hetsika fanatanjahantena goavambe sy fanentanana anatiny hanafoanana izany.
Raha ny loharanom-baovao sasany avy any an-toerana dia mety handroso tsy misy mpijery ny Lalao Olaimpika, hatao ao ambadiky ny varavarana mihidy ny Lalao, na dia tsy nanamafy izany aza ny fanambaran'i Suga.
Ny mpikarakara ny Lalao Olaimpika Tokyo tamin'ny taona 2020 dia efa nametra fetra henjana amin'ny Lalao, anisan'izany ny fandrarana ny mpijery any ivelany ary ny famerana ny isan'ny mpankafy 10,000 XNUMX na antsasaky ny fahaizan'ny toerana tsirairay.